Kevin de Bruyne oo ballan-qaad weyn u sameeyey Vincent Kompany kaasoo Man City ay caawa kulan sagootin ah u sameynayso – Gool FM
Kevin de Bruyne oo ballan-qaad weyn u sameeyey Vincent Kompany kaasoo Man City ay caawa kulan sagootin ah u sameynayso
Haaruun September 11, 2019
(Manchester) 11 Sebt 2019. Kevin de Bruyne ayaa u sheegay ciyaaryahankii hore ay isaga ka wada tirsanaayeen kooxda Manchester City ee Vincent Kompany u sameeyey ballan-qaad weyn.
Xiddiga reer Belgium De Bruyne ee ay isku waddanka ka soo jeedaan ee Vincent Kompany ayaa difaacii hore ee Man City u ballan-qaaday inuu kula biiri doono kooxda Anderlecht ka hor inta uusa ka fariisan ciyaaraha.
Kompany, kaasoo caawa kulan sagootin ah loogu sameyn doono garoonka Etihad ayaa intii lagu guda jiray xagaaga waxa uu door ciyaaryahan iyo tababare ka qabtay kooxda Anderlecht.
De Bruyne ayaa shaaca ka qaaday inuu u xiisay daafacan dhexe, laakiin 28-sano jirkaan ayaa wacad ku maray inuu kula biiri doono Anderlecht saaxiibkiisa xulka qaranka Belgium markii uu ka tagayo Citizens.
“Waxaan rajeynayaa in mustaqbalkiisa ciyaareed uu noqon doono mid layaab ku ah Anderlecht sidii ay ahayd City, waxaan u sheegay inaan boos ka helo kooxdiisa hal sano ama todobo, markii aan halkaan ka dhammaado,” ayuu De Bruyne u sheegay Wargeyska The Sun.
“Haddii uu sidaas ii sameeyo anigu waxaan horay u qaadi doonaa tallaabadeyda xigta iyo shaqadeyda xigta.”
De Bruyne ayaa ka mid ahaa xiddigaha da’da yar kooxda reer Belgium ee Genk ugu dambeynna waxa uu u saftay 113 kulan ka hor inta uusa ku soo biirin kooxda Chelsea sanadkii 2012-kii.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahan Vincent Kompany ayaa xaqiijiyey inuusan ciyaari karin kulan isaga lagu maamuusayo caawa ee lagu sagootinayo, sababo la xiriira dhaawac uu ka qabo bowdada.
Kooxda Manchester United oo suuqa bisha Janaayo dib ugu laabanaysa Paulo Dybala
Virgil van Dijk oo sharad adag la galay dhamaan kooxaha ay xafiiltamaan Liverpool